TTSweet: အဘွားရဲ့  ချိတ်ထမီ ...
Posted by T T Sweet at 10:11 AM
Long time no see ...aunty sweet
Glad that u r back TTSweet.
I'm so happy to see your post.
Long time no see. Looking forward to the new posts.
T T Sweet October 4, 2013 at 3:23 PM
ွှThanks guys, sorry for disappearing without any message. Thanks again for coming back my blog and still reading my post. I hope I can write new posts in future. I will try.
Thanks for writing back.. :)
I always come & your blog hopefully new post....
Long time no see. I always come to ur blog and glad to see you again.
ဆွေလေးမွန် October 4, 2013 at 5:57 PM
တီဆွီ...ပျောက်နေတာကြာပေါ့။ဘာသံမှ မကြားလို့..ခုလိုကျပြန်တော့ ဖတ်သွားပြီနော်
Anonymous October 4, 2013 at 5:58 PM
ပျောက်နေလို့ သတိရနေတာ.. အရင်လို စာတွေ ပြန်ရေးပါအုံး အားပေးနေပါတယ်ဗျာ
We missedalot your blog. Thanks for writing back.
ko9October 4, 2013 at 8:27 PM
အလုပ်ထဲမှာ အသားကြသွားလို့ စာပြန်ေ၇းတာထင်ပါ၇ဲ့...Keep writing...Cheer !
Quoting "Thanks again for coming back my blog"
We often visit your blog even though the host is not there.
Hope to read your new post very frequently
khin October 5, 2013 at 12:18 PM
Yayyy...... I'm so glad that u r back mama Sweet.... love to see ur new post always.... although there was no new post for being long time, I was crazily checking so often. Cheers....
mstint October 5, 2013 at 1:02 PM
ချိတ်လုံချည်လေးတွေ မြင်ရတာ ကျက်သရေရှိတယ် ဆွိတီရေ...
ဆွိတီ အဖွားပြောတာလေးကို ဖတ်ရတော့ တီတင့်ဖွားဖွားကို အပြေးလေးသတိရလိုက်တယ်...
သူနှစ်သက်တဲ့ ပဒုမ္မာအင်္ကျီဖြူလေးနဲ့ လုံချည်လေးတစ်စုံကို အလားတူ သိမ်းထားခဲ့ဘူးတယ်...
ရှေးလူကြီးများ စနစ်ကျပုံသဘောကျတယ်... တီတင့်ဖခင်ကြီးဆိုရင် သူ့အတွက် သဂြိုလ်စရိတ်ဆိုပြီး
ကျန်းမာစဉ်ကထဲကဖယ်ပြီး သားသမီးတွေကို မှာထားခဲ့တာလေ... :)
ko linn October 7, 2013 at 4:54 PM
Bravo.Thanksalot.
ko linn October 7, 2013 at 4:55 PM
ဘယ်တော့များ ပို့စ်အသစ်တက်မလဲလို့ လာလာကြည့်ရတာ မောတောင်မောတယ် welcome back!
HtooHtoo October 9, 2013 at 9:15 PM
မမ စာပြန်ရေးပြီ။ 
We haveaplan to do peaceful demonstration if you do not haveanew post for your blog ;)
T T Sweet October 12, 2013 at 9:32 PM
အနောနိမတ်စ်တွေက ဂလောက်တောင် အားပေးနေတော့ အန်တီဆွိမှာ အားတောင်နာတယ်။ ကိုယ်ကလဲ သိပ်မရေးဖြစ်တော့ ဘယ်လိုမျက်နှာပြရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ ဓာတ်ပုံတွေ မတင်တော့ဘူးနော်။း))
San San Htun October 16, 2013 at 2:58 PM
ချိတ်ထမီလေးက လှလိုက်တာ တီတီဆွိ...ပျောက်ချက်သား ကောင်းလှချည်လား..Welcome back sister..I love ur blog and writing..း)
တန်ခူး October 17, 2013 at 12:05 AM
အဖွားထမီတွေတို့ လဲ အရမ်းသွားရေကျခဲ့တာ သူငယ်ချင်းရေ. အဖွားအတူလာနေတော့ ထမီတွေအများကြီးပေးတာ ပျော်လိုက်တာ မပြောနဲ့အပြာရောင်တောက်တောက်ပေါ် အနက်ရောင်ဝါးခက်လေးတွေပါတဲ့ ထမီလေးဆို အာအိုင်တီမှာအတော် ဝတ်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်. အဖွားအင်္ကျီပွပွတွေလဲ ဝတ်ဖြစ်သေးတာ. ဒီပို့ စ်လေးဖတ်ပြီး အဖွားဆုံးတုန်းက အရမ်းဝမ်းနည်းနေတာနဲ့ ဘာထမီလေးများလွှမ်းထားခဲ့လဲဆိုတာ သတိမထားမိတာ သွားတွေးမိတယ်. သူငယ်ချင်းအဖွားကသက်ရာကျော်ရှည် ကျန်းမာပါစေ
Anonymous October 23, 2013 at 11:15 AM
TT Sweet ပြန်လာပြီ...
တီဆွိတို့ မိသားစု ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ
we always visit your blog, welcome to come back.
I m so glad to see ya back, TT Sweet..
Natthamee December 4, 2013 at 10:44 AM